» सशिकला तामाङले जितिन् ‘मिस तामाङ पोखरा २०२०’, कसले कुन टाईटल जिते ? हेर्नुहोस्
सशिकला तामाङले जितिन् ‘मिस तामाङ पोखरा २०२०’, कसले कुन टाईटल जिते ? हेर्नुहोस्
६ माघ २०७६, सोमबार २०:३३
मकवानपुर, ०६ माघ । मिस तामाङ पोखराको पाँचौँ संस्करणको विजेता शशिकला बोम्जन तामाङ बनेकी छिन् । पोखरा सभागृहमा भएको फाईनल भिडन्तमा अन्य १६ जना प्रतियोगीहरुलाई पछि पार्दै शशिकलाले ताज जितेकी हुन् । सोनाम ल्होछारको अवसरमा बैदाम तामाङ सेवा समाजको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको फाईनलमा ‘तामाङ समुदायको विकासका लागि के योगदान दिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिँदै सशिकलाले उपाधी हात पारेकी हुन् । उनलाई नेपाल वायु सेवा निगमका क्याप्टेन तथा प्रतियोगिताका मुख्य निर्णायक विजय लामाले उक्त प्रश्न सोधेका थिए । सशिकला पोखराको लेकसाईड निवासी हुन् । रोचक कुरा उनी एक सफल पाईलट बन्न चाहान्छिन् । अनि उनले पाईलट विजय लामाकै प्रश्नको जवाफ दिँदै जित हासिल गरेकी छिन् । सशिकलाले मिस ट्यालेण्टको टाइटल पनि जितेकी छिन् । जितसँगै उनले रु १ लाख नगद, ताज, ट्रफी, प्रमाणपत्र सहित म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेकी छिन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
प्रतियोगितामा सलिना तामाङले फस्र्ट रनरअपसंगै बेस्ट वाक अवार्ड जितिन् । उनले नगद ५० हजार रुपैयाँ, ताज, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन् । त्यस्तै बेस्ट पर्फमरको टाइटल जितेकी रेणु तामाङ सेकेण्ड रनरअप बनेकी छिन् । उनले नगद ३० हजार रुपैयाँ सहित ताज, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी छिन् । ब्युटी विथ प्रपोज र भ्युअर्स च्वाईस अवार्ड जितेकी प्रिती वाइवा तामाङले नगद २० हजार पुरस्कार समेत प्राप्त गरेकी छिन् । प्रतियोगितामा बेस्ट हेयर अवार्ड अनिशा तामाङ, बेस्ट स्माईल अवार्ड बिन्दु तामाङ, मिस फोटोजेनिक अवार्ड किस्मत तामाङ, बेस्ट स्किन अवार्ड सरस्वती तामाङ, मिस कल्चर अवार्ड कोमल तामाङ, मिस डिसिप्लिन अवार्ड सृजना ब्लोन तामाङ, मिस ग्रेसफुल अवार्ड सुजाता तामाङ, बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड सृजना घिसिङ तामाङ, मिस कन्फिडेण्ट अवार्ड आकृति तामाङ, मिस पङ्चुअल अवार्ड भुमिका तामाङ, मिस पपुलर अवार्ड मनिषा तामाङ, मिस अर्गनाइजर च्वाइस अवार्ड सुमिक्षा तामाङ र मिस फ्रेण्डली अवार्ड स्वस्तिका तामाङले जितेकी छिन् । प्रतियोगितामा १७ जना प्रतियोगीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
सन् २०१६ देखि सुरु भएको मिस तामाङ पोखराको पहिलो संस्करणमा निमा लामा, दोस्रो संस्करण २०१७ मा दिप्ती गोम्जा, तेस्रो संस्करण २०१८ मा कविता योञ्जन र चौथो संस्करण २०१९ मा कुशुम स्याङ्बो तामाङले ताज पहिरिन सफल भएकी थिइन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।